Glamour Cocktail Bar eMessina
Izikhathi zokucabanga zobumnandi enhliziyweni yedolobha
I-Cocktail Bar Glamour a Messina ngokungangabazeki a Igumbi Elinye ukwazisa kakhulu edolobheni ngenxa yayo Ama-Cocktails nama-Aperitifs kanye Nesitolo Sokugcotshwa Kwamaqhwa.
Igqekeze omunye umgwaqo omuhle kakhulu enkabeni yeMessina, T. Cannizzaro, Glamour Ice Cream Bar eMessina sekuyindawo yomhlangano ehlonishwa yi-Messina Movida, empeleni nganoma yisiphi isikhathi sosuku kungenzeka ukuthi uhlale ematafuleni asemgwaqweni unambithe konke okukhethekile.
Yidla ibhulakufesi eGlamour Bar neCofi Granita neCream neBrioche
Ukudla kwasekuseni eMessina kuyaziwa ..., ngokwesiko kwenziwa ngeGranita di Ikhofi nge-ukhilimu ne-brioche ukuthi lapha kusuka Glamour Cocktail Bar eMessina zimelela ngobuhle ngokuphelele; eqinisweni, njalo ekuseni iMessinesi futhi hhayi kuphela ukunambitha ama-granitas adumile ekunambithekeni okuhlukahlukene okuhambisana nama-croissants asanda kubhakwa futhi anamakha, kanti kubantu abangathandeki kungenzeka ukunambitha ama-croissants nama-cappuccinos alungiselelwe ngendlela ekhethekile.
Woza ujabulele ama-cocktails adumile kanye nama-appetizer weGlamour Bar eMessina
Wonke amaMessinesi ayalazi ikhono leBarman lika Gramour Ice Cream Bar kulungiselelwa kwama-cocktails nama-appetizer alungiselelwe amakhasimende nsuku zonke ngaphambi kwasemini noma ntambama; Ama-Cocktails nama-Aperitifs ahlala ehambisana nama-appetizer akhetheke kakhulu namakhandlela manje anqobile umphakathi wabathandi, kodwa futhi nalabo ababonga ubuhle nobuqiniso bemikhiqizo enikezwayo.
Glamour Cocktail Bar eMessina ngolwazi olukhulu nobuchwepheshe
Yonke imininingwane ibinakekelwa kusukela kuvulwa muva nje yilabo abathola ulwazi olukhulu eminyakeni edlule bexhumana namakhasimende, empeleni abaphathi bahlonishwa kakhulu futhi bayaziwa bobabili ngozakwabo nangomphakathi waseMessina ngokusebenzisana kwabo kweminyaka eyishumi kwenye yezindawo zomlando edolobheni. abakwaGalimi bangaphambili, ulwazi lwabo nobungcweti babo benziwa butholakale kumakhasimende nsuku zonke ukuqinisekisa insizakalo nekhwalithi yomkhiqizo emazingeni aphakeme kakhulu.
Uma ufuna enye indawo ongayisebenzisa izikhathi zamahhala zosuku lwakho noma ucishe ikhofi elihle kakhulu, khetha Glamour Cocktail Bar eMessina.
Ikheli: I-Via T. Cannizzaro iyi.204
Ucingo: 090 663348
Umakhala ekhukhwini: 340 9266842
Inombolo ye-VAT: 03181330832